लगनखेलबाट हराएकी १३ वर्षीया किशोरी कसरी पुगिन् भारत ? - Jyotinews
ज्योतिन्यूज २०७७ असार २३ गते ७:२९
कसरी भारत पुर्याइयो किशोरीलाई ?
घरबाट निस्केपछि सिधै उनीहरु ठमेल पुगेका छन् । ठमेलमा उनीहरुको सिन्धुपाल्चोकका कृष्णसँग भेट हुन्छ । कृष्णले किशोरीलाई ललाईफकाई विभिन्न आश्वासन देखाउँछन् । किशोरी कृष्णसँग बस्न तयार हुन्छिन् ।